राती सुतेको बेलामा खुट्टा बाउँडिन्छ ? यी कार्य गर्नुहोस – Khabar Chautari
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पौष १७, २०७७ समय: १८:४१:३८
काठमाडौँ- सबैभन्दा तितो तरकारी करेला, धेरै कम मात्रालाई मन पर्ने गर्दछ । यसको स्वादका कारण धेरैले यसलाई रुचाउँदैनन् । यद्यपि केही भने करेला भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन् ।स्वाद तितो भए पनि करेला स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक हुन्छ । करेलामा भिटामिन बी १, बी २, बी ३, भिटामिन सी जस्ता तत्वहरु पाइन्छ । यसैगरी, करेलामा क्याल्शियम र प्रोटिन पनि पाइन्छ । यस्तोमा करेलाको सेवनले निम्न लाभ पुर्‍याउने गर्दछ ।
१. लगातार तौल बढिरहेको छ भने करेला सेवन निकै लाभदायक हुन्छ, यसको सेवनले केहि मात्रामा वजन घटाउन मद्दत पुग्दछ ।२. यसको सेवनले इन्सुलिनको मात्रा र रगतमा चिनीको मात्रा सन्तुलन राख्ने काम गर्छ ।३. करेलाको सेवनबाट इन्सुलिन सक्रिय हुन्छ र चिनीलाई बोसोमा परिणत हुन दिँदैन ।४. करेलामा फाइबरको मात्रा हुने भएकाले यसले लामो समय भोक लाग्न दिँदैन ।५. यसमा पानीको मात्रा उच्च हुन्छ, तसर्थ यसको सेवनले शरीरमा फाइदा पुर्‍याउँछ ।६. करेलाले बोसो कोशिकाहरु निर्माण र वृद्धि विकास रोक्ने काम गर्दछ ।७. करेलामा क्यालोरी र कार्बोहाइड्रेटको मात्रासमेत धेरै हुन्छ । १०० ग्राम करेलामा लगभग ३४ क्यालोरी हुन्छ ।-एजेन्सीको सहयोगमा ।